Madaxweyne Ku xigeenka Maamulka Gobalada Dhexe Ee Ahlusuna Ayaa Xabsigii Lagasiidaayey – STAR FM SOMALIA
C/laahi Xersi Daacad Diirshe oo ka mid ah Madaxweyne ku xigeenadii Ahlu Sunna ay kaga dhawaaqeen Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud, ayaa waxa uu dib u helay xuriyadiisa, kadib markii maalmihii lasoo dhaafay uu ku xirna Magaalada Cadaado.
Masuulkaan ayaa sheegay sababta xarigiisa inay tahay arin qalad ah, maadaama uu ka hadlay fekerkiisa, balse sida uu sheegay uusan isaga hubeysnayn.
Waxa kale uu eedeeyay Maamulka Galmudug oo uu sheegay inay ka xadgudbeen shaqsiyadiisa, islamarkaana uu arintaasi aad uga xun yahay.
Masuulkaan ka tirsan Ahlu Sunnada ku sugan Dhuusamareeb, ayaa sheegay lagu xiray Magaalada Cadaado, kadib markii Warbaahinta uu dhaleeceen kala duwan uga jeediyay Maamulka Galmudug.
Galmudug ilaa hada kama aysan hadlin sababta ka dambeysay xariga masuulkaan.